I-Geomatics kunye neSayensi yoMhlaba kwi-2050-Geofumadas
Ikhaya/Ezahlukeneyo/I-Geomatics kunye nezeNzululwazi zomhlaba ngo-2050
Kulula ukuqikelela into eza kwenzeka kwiveki; I-ajenda ihlala ihleliwe, kuba uninzi lweziganeko ziya kurhoxiswa kwaye kuya kuvela omnye ongalindelekanga. Ukuqikelela okunokwenzeka kwisithuba esingangenyanga kwaye nangonyaka kuhleliwe kwisicwangciso sokutyala kwaye iindleko zekota ziyahluka kancinci, nangona kufanelekile ukushiya inqanaba leenkcukacha kwaye wenze ngokubanzi.
Ukuqikelela okunokwenzeka kwisithuba seminyaka engama-30 yinto engenamsebenzi, nangona kuya kuba ngumdla kuhlolisiso lwawo onke amanqaku akolu hlelo. Ukusuka kwicala le-geomatic, sinokuthi sicebise imiba ngokunxulumene netekhnoloji, imithombo yolwazi yokugcina iindaba okanye ukufundiswa nangona kunjalo, kwixesha elide kukho izinto eziguquguqukayo ezingalindelekanga ezinjengotshintsho lwenkcubeko kunye nefuthe lomsebenzisi kwimakethi.
Umsebenzi onomdla kukujonga emva indlela izinto ebeziyenzeka ngayo kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, ukuba zinjani ngoku kwaye imeko yemizi-mveliso ibhekephi, inxaxheba kurhulumente kunye nakwizifundiswa; ukwazi malunga nendima yejomatics kulawulo lolwazi kunye nemisebenzi yezinto ezenziwa ngabantu kwiindawo zentlalo, ezoqoqosho kunye nokusingqongileyo.
Ukubuyiselwa kwakhona kwiminyaka engama-30 ngaphambili
Iminyaka engama-30 eyadlulayo yayingu-1990. I-Lotus 123, iZwiPerfect, iDbase, Printa Master kunye ne-DOS njengenkqubo yokusebenza. Ngelo xesha, abasebenzisi abanokufikelela ngakumbi kwisoftware yoyilo lweCAD / GIS baziva njengookumkani kwindalo iphela; ukuba babenayo Intergraph kuba iiPC eziqhelekileyo zadambisa umonde kunye nokugculelwa kwabaqulunqi bephepha.
Sithetha ngayo I-Microstation 3.5 for Unix, I-generic CADD, AutoSketch kunye ne-AutoCAD okokuqala ngqa kuloo nyaka wayiphumelela I-Byte Magazine, xa amaqhosha enziwe ii-ayikhoni zemifanekiso kunye nezinto ezintsha kwiphepha ekungekho mntu uqondayo. Ukuba ubulindele ukungena kwi-3D ukongeza kwafuneka uhlawule i-ACIS.
Kuya kuhlala kungunyaka ngaphambi kokudibana kokuqala kwayo ArcView 1.0, ke ngo-1990 lowo wayesazi nge-GIS wayenza nayo I-ARC / INFO kumgca wokuyalela.
Malunga nesoftware yasimahla, kuya kuthatha iminyaka emi-2 ukuba ivele IBAKALA 4.1, nangona zonke ezi teknoloji zazinokuvuthwa kohambo ukusukela ngo-1982.
Ngokunxulumene nonxibelelwano lwehlabathi, ngonyaka we-1990 uya kuthi shwaka ngokusemthethweni I-ARPANET Iikhompyuter ezili-100.000 ezixhunyiwe; kude kube ngu-1991 eli gama laliza kuvela iwebhu yelizwe jikelele. Eyona nto ibalulekileyo kwezemfundo yayizifundo zembalelwano kuba Moodle Wanika ii-pininos zakhe zokuqala de kwangowe-1999 kwaye kuphela kwendlela yokuthenga into yayikukuya esitolo okanye ngefowuni kwinombolo yekhathalogu eprintiweyo.
Imeko yangoku ye-Geomatics kunye nezeNzululwazi zomhlaba.
Ukubona indlela izinto ezazenzeka ngayo kwiminyaka engama-30 eyadlulayo, siyazi ukuba siphila kumzuzu ozukileyo. Ayisiyiyo kuphela isoftware yasimahla kunye neyasetyenziswayo, kodwa iyenzela yonke imveliso. I-geolocation kunye nokunxibelelana kuye kwaba yinto engaphakathi kangangokuba umsebenzisi uhamba ngeselfowuni, acele inkonzo yokuhanjiswa kwekhaya, agcine igumbi kwelinye ilizwekazi ngaphandle kokuqonda ukuba ulungelelwaniso lwe-UTM lusebenza njani.
Inqaku elinomdla kukudibana kwemeko yobunjineli yeGeo. Uqeqesho lokulawula idatha olukhule ngeendlela ezahlukileyo kuye kwanyanzeleka ukuba kuguqulwe kulawulo lomsebenzi, kufuneka kwenziwe lula kwaye ngokungathandabuzi ukwamkela ukubekwa emgangathweni.
Oku kudityaniswa kwamacandelo ajikeleze ukuhamba komsebenzi kufuna ukuba abaqeqeshi bandise ulwazi lwabo ngokusekwe kwinkampani efuna ukusebenza ngokukuko. IJografi, ijografi, umvavanyi, injineli, umyili wezakhiwo, umakhi kunye nomsebenzisi kufuneka babonise ulwazi lwabo lobuchwephesha kwindawo efanayo yedijithali, eyenza umhlaba ongaphantsi kunye nomxholo womhlaba, uyilo lwevoluyum generic kunye neenkcukacha zeziseko ezibalulekileyo , ikhowudi engemva kwe-ETL njengonxibelelwano olucocekileyo lomsebenzisi ophetheyo. Ngenxa yoko, i-akhademi ihamba kwinqanaba elibalulekileyo lokugcina isithembiso esihlangabezana neemfuno zeshishini ezintsha kunye nokuziphendukela kwemarike.
Kukho imijikelezo yokuqhushumba kwizinto ezintsha. Okwangoku siza kubona ukuqala.
Iminyaka engama-30 yokujonga okuzayo.
Kwiminyaka engama-30 ubuqaqawuli bethu obubonakalayo bunokubonakala ngathi abudala. Nokuba ufunda eli nqaku liza kubangela imvakalelo yokuhlangana phakathi kwesiqendu se Jetsons kunye neMidlalo yeMidlalo yeNdlala. Nangona sisazi ukuba iindlela ezinje ngokunxibelelana kwe5G kunye nohlaziyo lwesine lweshishini lusondele, akukho lula ukubona utshintsho oluza kubakho kwinkcubeko yabafundi-kutitshala, kurhulumente-kubemi, kwinkampani yabasebenzi, kubudlelwane babathengi. umvelisi.
Ukuba sithetha ngezinto eziqhubekayo kushishino ngoku, urhulumente kunye nezifundo, ezi ziimbono zam ezithile.
Ukwamkelwa kwemigangatho iya kuba yinto esesikweni koxanduva. Ayenzelwanga iinjongo zetekhnoloji kuphela okanye iifomati zolwazi, kodwa ekusebenzeni kweemarike. Iya kuba yinto eqhelekileyo ukumisela mgangatho amaxesha okuthotyelwa konikezelo lweenkonzo, iziqinisekiso zokusingqongileyo, iziqinisekiso zokwakha. Umzi mveliso wegeomatics kufuneka ubandakanye ngakumbi imeko yomntu, njengoko izakudlala indima ebalulekileyo ekunxibelelaniseni umhlaba wokwenene namawele edijithali, ngaphaya kokumelwa komzekelo, izivumelwano zokunxibelelana kwabantu, iinkampani kunye norhulumente.
Ngo-2050 i-blockchain iya kuba yinto yokuqala ye-protocol, hayi njengesisombululo kodwa njengesilumkiso kwingxaki enkulu, apho ukumiselwa komgangatho kufanele kube yinto eqhelekileyo.
Ukusebenziseka kuya kugqitywa ngumthengi wokugqibela. Umsebenzisi wetekhnoloji, imveliso okanye inkonzo ayizukuthatha inxaxheba kuphela kuthethwano kodwa nakwisigqibo; ekuya kuthi ngayo imiba efana noyilo lwedolophu kunye nolawulo lokusingqongileyo ibe ngamathuba oqeqesho olunxulumene nomhlaba. Oku kuyakuthetha ukusebenzisa ulwazi olugqithisileyo kwizifundo ezinje ngejografi, ijiology, ubume bendawo okanye ubunjineli kwizisombululo apho umsebenzisi wokugqibela ethatha izigqibo. Umsebenzi kufuneka ujike ulwazi lwayo lube kwizixhobo, ukuze ummi agqibe apho afuna indlu yakhe, akhethe imodeli yoyilo, alungelelanise iiparameter ngokuthanda kwakhe kwaye afumane izicwangciso, iilayisensi, izithembiso kunye neziqinisekiso kwangoko. Ukusuka kwicala lokuthatha izigqibo, olu hlobo lwesisombululo luya kusebenza kokubini kwinqanaba leasethi, njengothungelwano lwezixhobo zonxibelelwano, inkqubo yommandla okanye yesizwe; Ngezinto ezinokufunyanwa geolocatable, iimodeli zemathematics kunye nobukrelekrele bokuzenzela.
Unxibelelwano kunye nokunxibelelana kunye nexesha lokwenyani kuya kuba yinto yangaphakathi. Kwiminyaka engama-30, ulwazi lwejografi njengemifanekiso, iimodeli zedijithali, izinto eziguquguqukayo kokusingqongileyo kunye nemodeli
Uqikelelo s luya kuchaneka kwaye lufikeleleke. Ngale nto, iisenzi zokufumana ulwazi kwii-satellites kunye nezixhobo kwindawo ephantsi ziya kusetyenziselwa ukusetyenziswa kwemihla ngemihla nje ukuba boyise ubunzima babucala kunye nokhuseleko.
Yonke imfundo iya kuba yinto ebonakalayo kwaye isampulu iya kuncitshiswa. Iindawo ezininzi zokunxibelelana kwabantu ziya kuba yimfundo ebonakalayo, engenakuphepheka. Oku kuya kukhokelela kulwakhiwo lolwazi olungafunekiyo kubomi obusebenzayo kunye nokubekwa emgangathweni kwezinto ezinemiqobo efana nemida, isikali, ulwimi, umgama, ukufikelela. Nangona imida iya kuqhubeka ibaluleke kakhulu, kwimeko ebonakalayo iya kufa ngenxa yentengiso kunye nokuwa kwehlelo lobudenge. Ngokuqinisekileyo i-Geomatics ayinakufa, kodwa iya kuguquka ekubeni yingqeqesho ye-elite yobungcali kulwazi olusondeleyo lwemiceli mngeni emitsha yoluntu.
Okwangoku, ukuze uzive wanelisekile ukuba ubeyinxalenye "yeminyaka engama-30 eyadlulayo", ulibonile eli xesha ngoku kunye nemvakalelo yokungena kumjikelo omtsha apho kuphela izimvo ezivumela ukwenziwa kwezigqibo zinikezela ngamava angcono omsebenzisi. .
Ukuba ufuna ukubona imeko malunga neli xesha ledijithali, cofa apha